By Admin on	 September 5, 2016 साहित्य
मैले कुनै धर्म लिएकी छुइँन । धर्म नलिनु भनेको धर्म नत्याग्नु हो । म जन्म जात हिन्दू हूँ । मैले मेरो धर्म त्यागेको छैन । अठासी हजार ऋषीमुनीहरु, तेत्तिसकोटी देवताहरु, माहाभारतका कौरव, पाण्डव र चर्चित देवताहरु, नाङ्गा गरिव शिव र उनकी सती जो तीन जन्म उनकै मात्र भइन् । सती र साबित्री, पार्वती र गोमा ।
फेरि एउटै दरबारमा पाँच पाण्डवकी एक द्रौपदी अनि एउटा राजाका हजारौ रानीहरु । पाँच पाण्डवका पनि द्रौपदी वाहेकका निजी रानीहरु । कृष्णका अठारसय गोपिनीहरु र उनीहरुको चीर हरण अनि नाङ्गोपन ।
आदर्श राजा रामचन्द्र । लङ्का पुर्याएकै भरमा पर पुरुषसँग रमाएको आरोपलगाएर रामचन्द्रबाट त्यागिएकी सीता ।
स्वर्ग र त्यहाँका राजा ईन्द्र । सुखभोगका लागि असुरहरुसँगको लडाइँ । अनि प्रेमको लागि अर्धनग्न भेषभुषाले सिङ्गारीएका नर्तकी अप्सराहरु ।
शिव भगवानसँग जोडिएको आजको तिज पर्व र यो पर्वको कथित भड्किलो पन, नारी उसको खानपिन र भेषभुषा इतिहासकै निरन्तरता हो । नारी रुपहरु इतिहासदेखिनै मनोरञ्जनको रुपमा प्रयोग गरिएका र सौन्दर्य चर्चा भएका विषय हुन् ।
यस्तो चरित्रको पूर्वीय दर्शनलाई ईश्वरको रुपमा आज हामी पूजा गरिरहेका छौ । आखिर किन ?
वास्तवमा हामी भित्र जस्ता ब्यबहारहरु भए पनि हामी एउटा आर्य समाजको धरातलबाट सामाजिक सभ्यता खोजिरहेका छौ । सभ्यता आचरणसँग जोडिन्छ । आचरण निर्माणको लागि धार्मिक गतिबिधिले ठुलो सहयोग गरेका छन् । त्यहाँ नारीको भुमिका महत्वपूर्ण छ ।
ईश्वर भनेको माथिको सबै चरित्र होइन ।
एउटा अदृश्य शक्ति हो जसको हामी सबैले प्रथना गर्छौ । जुन प्रार्थनाभित्र नारी पनि सँगै आउँछे । रोजाई र चर्चाको विषय बन्छे ।
अरु भन्नु पर्दा ईश्वर भनेको एउटा आफु सूत्ने कोठाको भित्तामा ठोकिएको काँटी हो, जहाँ लगेर एउटा सर्ट झुन्डाए जस्तै आफ्नो मन लगेर ईश्बरको नाममा झुन्ड्याइन्छ । अनि विभिन्न शैलीले नारीको नाममा पनि झुन्डाईन्छ ।
सम्पूर्ण धर्म र सुखका तरेलीहरु न कसैले दिने हो न कसैले लिने हो । यि सबै हाम्रा आफ्नै मनसँग र नारी पुरुषको अन्तर सम्बन्धसँग सम्बन्धित छन् । सामाजिक सभ्यताका लागि युग सुहाउँदो ब्यवहार सबैले गर्छन् र गर्नु पनि पर्छ ।
युगौंदेखिको पौराणिक तथा धार्मिक इतिहासलाई मनन् गर्दा नारीका लागि पुरुष र पुरुषका लागि नारी चर्चाकै विषय हुन् ।
किचक, रावण, वली दानबहरुले नारीकै लागि आफ्नो मरण वरण गरेको इतिहास छ । यसैगरी नारी पनि अन्त्यमा पुरुषमै समर्पित छन् ।
समसामयिक तिज र यसमा नारीहरुका विषयमा गरिएका टिप्पणीहरु भनेको इतिहासको निरन्तरता हो । कुनै न कुनै रुपले र तरिकाले नारी चर्चा गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिइन्छ यहाँ । यदि अदिकालदेखिकै सृष्टि र सभ्यताले यही खोज्छ भने किन नकारात्मक सोचले कुनै कुरालाई हेर्ने र…?
Previous Articleगीतकार सुवास राईको गीत सङ्ग्रहको सार्वजनिक
Next Article फिलिपिनी राष्ट्रपतिले भने -विद्रोहीलाई समाप्त गर्न गोर्खा सैनिकको सहयोग चाहियो